खेल संसार – Page 12 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १३:५३ English
सागः पुरुष फुटबलमा माल्दिसभ्सलाई हराउँदै नेपाल फाइनल नजिक २१ मंसिर २०७६, शनिबार १५:४०
काठमाडौँ, २१ मंसिर । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगीता (साग) अन्तर्गतको पुरुष फुटबलमा नेपालले माल्दिसभ्सलाई हराएको छ । नेपालभन्दा तुलनात्मक रुपमा बलियो टोली माल्दिसभ्सलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल फाइनल नजिक पुगेको हो । दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा १८औं मिनेटमा..
सागः महिला क्रिकेटमा नेपाललाई काश्य पदक २१ मंसिर २०७६, शनिबार १४:०२
काठमाडौँ, २१ मंसिर । नेपाली महिला क्रिकेटले १३ आँै दक्षिण एसियाली खेलकुदमा काश्य पदक जितेको छ । माल्दिभ्समाथि १० विकेटको फराकिलो जितसँगै नेपालले काश्य पदक जितेको हो । माल्दिभ्सलाई ८ रनमै अलआउट गर्दै नेपालले पदक जितेको हो । अञ्जलीले ४ ओभर बलिङ गर्दा ३ मेडन राख्दै जम्मा १ रन दिएर ४..
नेपाली क्रिकेटले सागमा स्वर्ण जित्ने सपना सक्यो २१ मंसिर २०७६, शनिबार १३:५२
काठमाडौँ, २१ मंसिर । काठमाडौँमा जारी दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगीता (साग) अन्तर्गत क्रिकेटमा नेपालले स्वर्ण पदक जित्ने सपना सकाएको छ । आजको खेलमा बंगलादेशको यू–२३ टिमसँग ४४ रनले हारेसँगै नेपालको स्वर्ण जित्ने सपना टुटेको हो । नेपालले अब काश्य पदकका लागि खेल्नेछ । बंगलादेशले..
सागः क्रिकेटमा माल्दिभ्समाथि नेपालको फराकिलो जित २० मंसिर २०७६, शुक्रबार १७:१०
काठमाडौँ, २० मंसिर । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलुकद प्रतियोगिता (साग) अन्तर्गत आज भएको पुरुष क्रिकेटमा नेपालले माल्दिभ्सलाई ८४ रनले पाखा लगाएको छ । १६४ रनको लक्ष्य पछ्याएको माल्दिभ्सले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै ७९ रन जोडेपछि नेपालले फराकिलो जित हात पारेको हो । नेपालका..
सावित्राले बनाईन ऐतिहासिक रेकर्ड १९ मंसिर २०७६, बिहीबार १५:०६
काठमाडौँ, १९ मंसिर । नेपालका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै सावित्रा भण्डारीले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेकी छिन् । पोखरा रंगशालामा बिहीबार माल्दिभ्सविरुद्धको खेलमा गोल गर्दै सावित्राले नेपालका लागि सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीको रेकर्ड कायम गरेकी हुन् । आजको गोलसँगै सावित्राले..
साग क्रिकेटः नेपालसँग हार्‍यो भुटान १९ मंसिर २०७६, बिहीबार १२:३५
काठमाडौँ, १९ मंसिर । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गतको क्रिकेटमा नेपालले भुटानलाई १४१ रनको भारी अन्तरले हराएको छ । टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै २३६ रनको विशाल योगफल खडा गरेको थियो । नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले शतक..
कप्तान मल्लको सतकीय पारीसँगै नेपालले बनायो हालसम्मै बढी रन १९ मंसिर २०७६, बिहीबार १०:३५
काठमाडौँ, १९ मंसिर । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले टी–२० मा सतक प्रहार गरेका छन् । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत बिहीबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको भुटानविरूद्धको खेलमा ज्ञानेन्द्रले ५२ बलमा सतक बनाएका हुन् । ५ चौका र ९ छक्का प्रहार गरेका..
साग फुटबलः नेपालको सानदार सुरुवात १७ मंसिर २०७६, मंगलवार १६:१२
काठमाडौँ, १७ मंसिर । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) अन्तर्गतको फुटबल खेलमा भुटानलाई हराउँदै नेपालले सानदार सुरुवात गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई ४–० गोलअन्तरले हरायो । नेपालका तर्फबाट सुजल श्रेष्ठले २, अभिषेक रिजाल र..
मेस्सीले जिते किर्तीमानी बालोन डी’ओर अवार्ड १७ मंसिर २०७६, मंगलवार ०९:४७
एजेन्सी, १७ मंसिर । बार्सिलोनाका कप्तान एवम् अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेस्सीले छैटौँ पटक बालोन डी’ओर अवार्ड जितेका छन् । उनले लिभरपुलका भर्जिल भान डाइक र युभेन्टसका खेलाडी एवम् पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पार्दै उपाधि जितेका हुन् । योसँगै मेस्सीले..
सागमा आज २० स्वर्णको छिनोफानो हुँदै १७ मंसिर २०७६, मंगलवार ०९:३८
काठमाडौँ, १७ मंसिर । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत आज २० स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । मंगलबार विभिन्न १५ खेलको २० स्वर्णको छिनोफानो हुने भएको हो । एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, क्रिकेट, साइक्लिङ, फुटबल, गल्फ, कराते, खो खो, सुटिङ, टेबलटेनिस, तेक्वान्दो, ट्रायथोलन, भलिबल र..
सागममा पर्वतीले जितिन स्वर्ण १६ मंसिर २०७६, सोमबार १४:५८
काठमाडौँ, १६ मंसिर । काठमाडौँमा जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) अन्तर्गत तेक्वान्दोमा नेपालकी पार्वती गुरुङले स्वर्ण पदक जितेकी छिन् । पार्वतीले पुम्सेको २९ वर्ष मुनिको विधामा स्वर्ण जितेकी हुन् । उनले सर्वाधिक ८.२५० अंक प्राप्त गरेकी छिन् । यसैबिधामा..
फिफा बरियतामा नेपाल ३ स्थान तल झर्‍यो १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार १०:४०
काठमाडौँ, १३ मंसिर । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को नयाँ बरियतामा नेपाल ३ स्थान तल झरेको छ । फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ बरियतामा नेपाल यसअघिको १६७ औं स्थानबाट घटेर १७० औं स्थानमा पुगेको हो । दक्षिण एशियामा पनि नेपाल भारत र माल्दिभ्सभन्दा तल छ । माल्दिभ्स १५५ औं र भारत १०८ औँ स्थानमा छ ।..
सागः महिला भलिबलमा नेपालको सुखद सुरुवात ११ मंसिर २०७६, बुधबार १६:५६
काठमाडौँ, ११ मंसिर । नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा विजयी सुरुवात गरेको छ । बुधबार भएको खेलमा बंगलादेशलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो । नेपालले २५–९, २५–९ र २५–११ ले बंगलादेशलाई पाखा लगायो । समुह ‘ए’ मा नेपाल,..
पोखरा प्रिमियर लिगः ६ टिमका १८ खेलाडी रिलिज, को को परे ? ११ मंसिर २०७६, बुधबार १०:४९
काठमाडौँ, ११ मंसिर । पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा सहभागिता जनाउने ६ टिमले आफ्ना १८ खेलाडी रिलिज गरेका छन् । ६ टिमले ३/३ जना खेलाडी रिलिज गरेका हुन् । पोखरा पल्टनले दिपेश खत्री, विक्रम भुषाल, दिभ्यांसु मलिक, चितवन राइनोजले शक्ति गौचन, स्वप्निल अधिकारी र आकाश थापा, बुटवल..
सागमा पदक विजेता खेलाडीलाई दिईने पुरस्कार बढ्ने १० मंसिर २०७६, मंगलवार १७:१३
काठमाडौँ, १० मंसिर । सरकारले दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगीता (साग) मा पदक विजेता खेलाडीलाई यसअघिको भन्दा धेरै राशीको पुरस्कार दिने भएको छ । आज काठमाडौंस्थित दशरथ रंगाशालामा सागमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुरस्कार राशी बढाईने..